Hong Kong ụgbọ elu iji nwalee njem njem na nkwado nke mgbake njem
Home » Akụkọ ụgbọ elu » Hong Kong ụgbọ elu iji nwalee njem njem na nkwado nke mgbake njem
Njem njem ga-enye ndị njem ohere dị mfe ịbanye na COVID-19 chọrọ maka ebe ha na-aga na ebe a kwadoro ebe a na-anwale ebe ha na-apụ.
N'okpuru ule a, Hong Kong ụgbọ elu ga-arụ ọrụ nke ọma na IATA iji nwalee ụlọ nyocha Lab ya, usoro ihe dị mkpa na Travel Pass
A ga-akpọ ndị njem nọ n'ụzọ ahọpụtara isonye
Ngwa ahụ na-enyere ndị njem aka ijikọ nsonaazụ nnwale COVID-19 ha na ụdị dijitalụ nke paspọtụ ha mepụtara site na ngwa ahụ
Konggbọ elu Hong Kong ga-anwale akwụkwọ ikike paspọtụ dijitalụ dị ka akụkụ nke onyinye ndị na-ebu ụgbọelu na-aga n'ihu iji mepee ókèala na njem mba ụwa. Ndi otu International Air Transport Association (IATA) meputara, otu ndi oru ahia nke uwa nile ma kwado maka ugbo elu, Travel Pass gha enye ndi njem ohere nnweta uzo COVID-19 choro maka ebe ha na agha na ebe anabatara ha ebe ha si. Ngwa ahụ na-enyere ndị njem aka ijikọ nsonaazụ nnwale COVID-19 ha na ụdị dijitalụ nke paspọtụ ha mepụtara site na ngwa ahụ.
N'okpuru ule a, Airlinesgbọ elu Hong Kong ga-arụ ọrụ anya na obodo ntà iji nwalee ụlọ nyocha ya, usoro ihe dị na Travel Pass. A ga-akpọ ndị njem nọ n'ụzọ ahọpụtara isonye site na ibudata ngwa ahụ na ịmepụta profaịlụ dijitalụ tupu ịhọrọ onye ọrụ ahụike na-esonye maka ule. Channelzọ nwere ezoro ezo, zoro ezo ga-eme ka ụlọ nyocha edebanyere aha iji nyochaa njirimara onye njem ahụ wee zipụ nsonaazụ nke ule COVID-19, ma ọ bụ ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi na ngwaọrụ mkpanaka njem ahụ. Nke a ga-ahụ ga-enyocha megide IATA si zuru ụwa ọnụ ndekọ nke COVID- 19 ike chọrọ, a usoro eji ọtụtụ ndị ụgbọ elu na ọdụ ụgbọ elu ụwa, iji hụ na usoro iwu chọrọ na-agbaso, tupu njem ahụ anata “OK njem”
Onye na-ahụ maka ịnyefe ọrụ na Hong Kong Airlines Mr Chris Birt na-aja mma maka atụmatụ dijitalụ nke IATA, nke ga-enyere ma ndị njem ma ụgbọ elu aka ijikwa nzere ahụike doro anya maka njem n'ọdịnihu.
“Hong Kong ụgbọ elu na-arụsi ọrụ ike iji mee ka njem dị nchebe maka ndị ahịa anyị. Anyị na-anabata ohere iji nye onyinye anyị n'ime mmepe nke Travel Pass ma ga-aga n'ihu na-akwado mbọ IATA na-eduga na mgbake nke njem mba ụwa. N'iburu n'uche ọnọdụ na-agbanwe agbanwe nke ọrịa na-efe ugbu a yana mgbanwe nke mmachi nke gọọmentị, njem njem bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya nke kacha mma ịga ngwa maka ndị njem iji nweta ozi njem kachasị emelitere, hụ na ha rube isi na ntinye ọhụụ chọrọ ma kwe.
ha jikwaa akwụkwọ ahụ ike dijitalụ ha n'ụzọ dị nchebe ma dị nchebe, "ka ọ gbakwụnyere.
“Artmalitegharị ụgbọ elu mba ofesi n’enweghị nsogbu abụrụla ụzọ nke atụmatụ IATA Travel Pass. Nick Careen, Onye isi oche Onye isi oche Ọdụ ụgbọelu nke IATA, ndị njem, Cargo, Security kwuru.
Hong Kong ekwuputala ọkwa na ị ga-eme ka iche iche ịchọrọ iche maka ndị njem na-abata. Bọchị iri na anọ nke ekwesiri iche iche na họtel a họpụtara, nke ga-esote otu izu nke njide onwe onye ga-emetụta ndị njem na-esite na ebe ndị nwere obere nsogbu yana ndị na-abịa site na ebe nwere nsogbu ma gbaa ọgwụ mgbochi. Gọọmentị na mba iri na isii na-akparịta ụka maka ikwe ka ndị agbatala ọgwụ mgbochi.
Njem US na-akpọ maka ụzọ ịmalitegharị ụgbọ mmiri
Ebe ntụrụndụ Island na-eduga na mgbake na njem ezumike zuru ụwa ọnụ
News na ụgbọ elu
Premier Jets onwe ya nwetara Oakland Air FBO na Oakland County International Airport
Kuwait njem njem
Kuwait gbochiri ụmụ amaala na-enweghị mgbochi ịhapụ ịhapụ ala ahụ
National Airways Corporation nwetara osisi 25% na Discover Jets
Ozi banyere njem na Turkey
Turkey na Russia ga-enwe mkparịta ụka na Antalya maka njem na njem mgbochi
Ebe ezumike Jeep